देउवालाई दिएको समर्थन कायम छैन : विष्णु पौडेल « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
काठमाडौं, २८ असार । एक साताको निरन्तर गृहकार्यपछि एमालेको १० सदस्यीय कार्यदलले पार्टी विवाद निरूपणका लागि दसबुँदे सहमतिको प्रस्ताव तयार गरेको छ । दोस्रो तहका नेताहरूले गरेको यो सहमतिमा नेता माधवकुमार नेपालले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
कार्यदलको सहमतिको प्रस्ताव आएलगत्तै नेता नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन र मुद्दाका सन्दर्भमा आफ्नो सहमति नरहेको बताएका छन् । यसै सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले विवाद समाधान कार्यदल सदस्य विष्णु पौडेलसँग गरिएको कुराकानी ।
१० बुँदे सहमति त बाहिरी मात्र हो । यसभित्र ओली र नेपालबीचको शक्ति सन्तुलन र पद बाँडफाँटसम्मका भित्री सहमति छन् भन्ने छ नि  ?
अदालतको फैसलापछि उत्पन्न हुने घटनाक्रमहरूमा एमाले अब एकढिक्का हुन्छ त  ?
विगतमा सरकारविरुद्ध नै एउटा समूह उभिएको थियो नि  ?
कार्यदलमा भएको सहमतिको वैधानिकता कहिले, कसरी प्राप्त हुन्छ ?
स्थायी कमिटीको अबको बैठक माधव नेपाल र रामबहादुर थापासहितका नेताहरूको संलग्नतामा हुन्छ  ?